Tag: wordpress ngwa mgbakwunye | Martech Zone
Tag: wordpress ngwa mgbakwunye
Ọ bụrụ na ị na -agba WordPress dị ka sistemụ njikwa ọdịnaya gị, a na -ahazi sistemụ ahụ ka ịkwanye ozi email (dị ka ozi sistemụ, ihe ncheta, wdg) site n'aka onye ọbịa gị. Agbanyeghị, nke a abụghị ụzọ dị mma maka ebumnuche ole na ole: Ụfọdụ ndị ọbịa na -egbochi ike izipu ozi ịntanetị na -apụ apụ na sava ka ha ghara ịbụ ebumnuche maka ndị na -egwu ha ịgbakwunye malware na -ezipụ ozi ịntanetị. E -mail nke sitere na sava gị adịchaghị mma
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị nwere vidiyo vidiyo ndị ị jirila ọtụtụ puku dollar, ị kwesịrị ị na-ebipụta vidiyo na YouTube iji nweta nsonaazụ ọchụchọ YouTube YouTube. dị nnọọ jide n'aka na ị na-ebuli gị YouTube videos mgbe ị na-eme. Nke ahụ kwuru, ịkwesighi itinye vidiyo YouTube na saịtị gị… maka ọtụtụ ihe kpatara ya: YouTube na-enyocha ojiji nke vidiyo ndị ahụ maka mgbasa ozi ezubere iche. Kedu ihe kpatara ị ga-eji chọọ kerịta nke gị